Rosia: Fampahalalam-baovao An-tserasera 2010-2011 Araka ny Hevitr’i Yandex.ru · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Marsa 2011 4:45 GMT
Transmediale Electroboutique, sarin-i Marius Watz
Tatitra vaovao an'i Yandex.ru[ru] “Tontolon'ny Fampahalalam-baovao ny RuNet. Septambra 2010 – Janoary 2011″ nanoro-hevitra fa mandroso ny fampahalalam-baovao an-tserasera Rosiana saingy mbola lavitra ny lalana aleha mba hahalasa azy ho fikambanana mpitatitra vaovao manara-penitra .
Tsy toy ny tamin'ny taona maro lasa, manana vaovao marobe hisafidianana ao amin'ny aterineto ny Rosiana. Mamoaka lahatsoratra vaovao manodidina ny 50,000 eo indray mandeha isan-kerinandro ny fampahalalam-baovao an-tserasera Rosiana, kanefa kely ihany ny fandahara-potoanan'ny fampahalala-baovao satria ny 20 isan-jato ny gazety an-tserasera no manome 80 isan-jaton'ireo tantara. Ny Gazety Rosiana be mpividy indrindra dia ny “Komsomolskaya Pravda” [ru] izay tena “mamokatra” vaovao marobe ka mamoaka lahatsoratra vaovao 900 isan'andro. Manome toerana malalaka tsy manam-petra ho an'ireo karazana tantara vaovao ny aterineto ary tsy mametraka fetra amin'ireo karazam-baovao afaka havoaka. Izany no mahatonga ny safidy ny tantara izay afaka jerena ao amin'ny tranokala fampahalalam-baovao an-tserasera tranainy ho marobe na misandrahaka kokoa noho ny filazam-baovao amin'ny endrika fampielezam-baovao mahazatra toy ny (radio, TV, gazety, sns.). Miaraka amin'ny “Komsomolskaya Pravda,” ny masoivohon'ny fampitam-baovao lehibe [hafa] dia mitondra vaovao marobe isan'andro koa. Mamoaka lahatsoratra 300-400 isan'andro izy ireo.
Araka ny hevit'iy comScore, orinasa an-tserasera misahana ny haivarotra (marketing), dia 40 tapitrisa ny Rosiana mpanaraka ny fampahalalam-baovao an-tserasera. Mipetraka ivelan'ny sisintany Rosiana (indrindra ao Eoropa) ny 30 isan-jaton'ireo olona (12 tapitrisa) izay mamaky ny vaovaon'i Rosia. Rariny tokoa izany hatramin'ny nandraisan’ i Eoropa ireo fiarahamonina Rosiana marobe sy ngeza indrindra.
Mampiseho koa ny tatitra fa mbola lavitra amin'ny fampiasana fitateram-baovao amin'ny endriny sy fomba samihafa ny Rosiana, 39 isan-jato ny fampalalaham-baovao no mampiasa sary amin'ny tantarany ary iray isan-jato mampalahelo kely no mampiasa radio sy lahatsary. Mifanohitra ny antony lehibe izany (ivelan'ny antony ara-bola) ho an'ny fampahalalam-baovao tranainy ho ao amin'ny aterineto: hitarina ny fomba filazana vaovao amin'ny alalan'ny fisafidianana malalaka ny fitaovam-pifandraisana mba hanatsarana ny fampisehoana ny vaovao sy fanomezana fahafaham-po amin'ny fahazoana mazava sy lalina ireo karazana toe-javatra miseho eo anivon'ny fiarahamonina.
Indrisy, fa ny hafainganana dia fepetra matanjaka izay mbola tsy hananan’ ny fampahalalam-baovao an-tserasera any Rosia . Mila 20-30 minitra vao mivoaka ny vaovao farany rehefa alefa amin'ny aterineto. Tsy dia zava-dehibe, saingy mbola ireo zava-mitranga maika ihany no afaka jerena ao amin'ny fifandraisana an-tserasera aorian'ny ora maro. Marina tokoa fa tsy mandrakotra ny fitaovana “namboarina” ny fanomezam-baovao amin'ny famoahana haingana ny vaovao (Twitter, forums, blogs, etc.) ary raha nitatitra vaovao amin'ny ora maromaro ny GVO teo aloha, maka ny vaovao amin'ny filazam-baovao farany avy ao amin'io fikambanana an-tserasera io ny fampahalalam-baovao tranainy.
Ahitana loharanom-baovao hafa ny tohin'ireo vaovao an-tserasera, ny folo isan-jaton'ireo dia dika-tahaka marina tamin'ny lahatsoratra voalohany izay nalefa tany ho any. Nanjary toetra mahazatra ny fampahalalam-baovao any Rosia izany. Raha nanoratra ny gazety malaza “Kommersant” [ru] tamin'ny taona lasa, “Amin'izao fiovana mankany amin'ny fandrosoana izao, ny fampahalalam-baovao, indrindra ny aterineto, dia toa vonona hanome vaovao marobe ho an'ireo mpamaky. Na dia izany aza, dia fahadisoan-kevitra izany. Raha ny tena izy dia tsy misy ny vaovao be die be amin'ny aterineto, ary ny fizaran'ny “lion” ny votoatiny mankany amin'ny mpamaky dia tsinotsinona fa tantara naverina nadika indray na vaovao foana (tsy misy na inona na inona).”
Ny ankamaroan'ny fampahalalam-baovao an-tserasera nadika sy “nalain-tahaka antsokosoko” dia vaovaon'ny orinasa RIA -Novosti, Interfax sy ITAR-TASS. Tsy mitovy tanteraka ny fampahalalam-baovao tranainy izany,fa araka ny hevitry ny orinasa “Medialogiya”, ny voatonona matetika dia ny gazety “Kommersant”, Gazetiboky “Forbes”ary radio “Echo Moskvy.”
Amin'ny mpijery ny fampahalalam-baovao taloha, nilaza ireo mpanao gazety fa ny 38 isan-jato ny fijerena vaovao an-tserasera dia mandeha mivantana ao amin'ny tranokala, tsy mila fampiasana adiresy hafa na fitadiavana fitaovana hafa. Nisy fitombony valo isan-jato izany nanomboka ny taona 2008. Nanazava i Yandex.ru fa efa zatra mahita vaovao an-tserasera sy izay mora hita na mitadidy ireo tranokala vaovao mahaliana azy ny olona mba ho fijerena izany haingana.
Misy koa ny fironan'ny serasera sosialy izay amin'ny fizarana vaovao. Saiky ireo fampahalalam-baovao an-tserasera dia misy mpitsidika miditra – na dia iray isan-jato ihany ary ny an-tsokosoko – avy amin'ireo mpamaky ny vaovao an-tserasera. Vkontakte.ru, tambazotra sosialy malaza indrindra ao Rosia, ary ny Livejournal.com, sehatry ny bilaogy malaza indrindra, no mitarika ny fironana.
Izay azo jerena ao amin'ny fampitam-baovao, ny media an-tserasera Rosiana, amin'ny fomba maro, dia mbola ao anatin'ny fahazazana. Maro amin'ireo fampahalalam-baovao tranainy eto an-toerana no mahazo fanohanana ara-bola ivelany hatramin'izao, tsy mila miahiahy momba ny krizy ara-toekaren'ny fampahalalam-baovao toy ireo namana mpiara-miasa any Etazonia sy Firenena Eoropeana sasantsany. Kanefa maro dia maro ireo olona mampiasa aterineto no efa miala amin'ny loharanom-baovao tranainy, mety ho hitantsika hoe hanao ahoana ny fahamatoran'ny fampahalalam-baovao amin'ny aterineto sy ny fampiasany ny fitaovana feno ilaina amin'ny seraseran’ izao tontolo izao.